Wada-shaqayntu Waa Furaha Guusha
Wada-Shaqayntu waa shaqo loo wadaqabto wadajir oo loo wada shaqaynayo wanaag guud (caam ah). Taas oo qofwalba dhankiisa hawshii ku aadanayd si daacad ah u dhamaynayo.
Waxaa jira sheeko waayo waayo oo kusabsan nin da'aweyn oo sariir-yaal ah isagoo kujira maalmihii ugu dambaysay noloshiisa. Wuxuu u yeeray wiilashiisii, wuxuuna weydiiyey in ay jebiyaan xayn ulo ah oo isku xiran, inkasta oo wiilashii ay ahaayen kuwo xoog weyn hadana wey ku guuldaraysteen in ay jebiyaan.
Ninkii odayga ahaa wuxuu wiilashii kuyiri ulaha xariga kafura oo mid mid u jebiya, si sahala ayaa midkasta oo wiilasha kamid ahaa u jebinkaray markaan dambe.
Ulahaas isku-xiran oo aan lajebinkarin waa midaysnaata, taas oo aan la burburin karin. Sidaas ayaa wadajirku ku noqday quwad.
Maalin ayaa rasuulku (scw) safar lagalay saxaabadiisii. Meel dhexe ayey istaageen ama joogsadeedn si ay u nastaan waxna u cunaan. Waxay go'aansadeen in ay lax (Neef-ido-ah) qashaan oo soshaan.
Mid kamida ayaa yiri, "Aniga ayaa qowracaaya". Midkale ayaa yiri, "Aniga ayaa haraga kasiibaya". Midkale ayaa yiri, "Aniga ayaa solaya." Midkasta oo saxaabadii kamida wuxuu ku deeqay shaqo iskaa-wax-u-qabso ah.
Rasuulkii (scw) ayaa yiri, "Aniga ayaa soo ururinayaa soona qaadaya xaabada (qoryaha) wax lagu solayo."
Asxaabtii ayaa tir, "Rasuulkii Allow, ma ahan in aad waxba qabatid anaga ayaa waxkasta qabanayna".
Rasuulkii (scw) wuxuu yiri, "Waan ogahay in aa waxkasta qabankartaan. Laakiin anigu marabo si idinka idinka duwan la iila dhaqmo (ama la iitixgeliyo) . Allah majecla qofka gooni iskayeela saxaabadiisa ama dadka lajira (ama la socda)." Sidaas ayaa rasuulkii qoryihii kudoonay oo kukeenay si wax loogu wada solo.
Taasi waa tusaale kusaabsan wada-jirka iyo wada-shaqaynta oo wanaaga loo wada shaqeeyo oo uu dejiyey Rasuulku (nabad gelyo iyo naxariis Allah korkiisa ha yeelee). Haddaba aan kabarano tusaalahaas.
Allah ayaan u baryeynaa wada-jir walaalaha oo ay wanaaga guud ka wada shaqeeyaan.
SOMALITALK.COM | Janaayo 28, 2002
Xigmadii Toddobaadkii hore
More at: Xigmadihii Hore